Esikhathini isichazamazwi sabantu abaningi, lenqwaba isitsotsi amazwi. Omunye wabo "sveg» ( «swag»). Kuyini lokhu? Leli gama linezincazelo izimpande Scottish. Ukuhumusha yokuqala "Swagger" lisho ukuthi "umuntu Gait liyaphambuka." Nokho, izwi ekuqaleni ngokungalungile lihunyushwe kwelesiHeberu Scottish English. Ngesikhathi esifanayo kwashintsha nencazelo yalo. Okwamanje, inani layo ( "Uzibonakalisa indoda") yaphenduka igama elithi "cool".
Swag - ukuthi kuyini nokuthi kusho ukuthini, uma sihlola impumelelo yabantu uzibekele imigomo? Lapho indoda ekuqaleni ingeyamakhosi imikhakha abampofu kakhulu emphakathini, bese wakwazi ukuceba futhi uthenge izesekeli ezibizayo, kuba kuhle kakhulu. Lona sveg kweqiniso. Ngalo mqondo izwi usuthandwa onesandla ukukhanya umculo kwenziwa hip-hop isitayela.
Swag - ukuthi kuyini nokuthi lusho ukuthini nengxenye enamandla isintu? Lena yi-version abesilisa ubukhazikhazi. Uma umelele nengxenye enamandla lesintu ungumnikazi umgexo wegolide ku ukushuba umunwe, lokhu swag.
Sveg-image yakhiwa izingxenye eziningana eliphawuleka kakhulu wabo - swag-izingubo. It kusikisela ukuba khona ivulekile cut sweatshirts futhi amahembe kanye izikibha kanye eziqongweni. Imfanelo EsiZulwini asinayo izinto kulesi siqondiso kukhona jeans, kanye nemidlalo kanye hip-hop ibhulukwe ne ukuncishiselwa ububanzi. onobuhle nezingubo sveg enziwe ngeenthombe elikhanyayo futhi esho neziqubulo ukumemeza. Kulokhu-ke imibala Indwangu kukhona Iphalethi ene-asidi.
isitayela Swag libhekene khona ubucwebe okukhulu. Ziningi ngamaketanga, namasongo amasongo umphelelisi esikhanyayo izinto ikhabethe. Thina abalandeli lesi sitayela Isigqoko ethandwa (ofeleba, wathungela izigqoko reperskie and isiHungary-hat ngamasimu iDemo).
swag izicathulo - kuyini? Lokhu ejimini izicathulo noma amateki. Nokho, kuyafaneleka ukuthi izicathulo lokhu akuyona into kancane okusikhumbuza ezemidlalo zakudala. Izicathulo kanye amateki sveg babe imibala egqamile. Shoes lokhu isitayela senziwa noma izicathulo flat noma platform obukhulu. Kukhona onobuhle High Heels. Izicathulo sveg ehlotshisiwe izakhi ezahlukene shiny, kanye zinhlayiya. Kungaba iyiphi nokukhanyayo futhi izintambo zezicathulo ezinemibala. Injongo eyinhloko yale izicathulo - ukuheha ukunakwa.
Isitayela swag - kuyini esithathwa abesilisa? Lona khona esiyisibopho izesekeli ezifana namasongo, amaketanga kanye namacici. Nokho, uma kwenziwa ngegolide noma ye-platinum. Yaziswa futhi izinto ezingavamile. Kakhulu imodeli stylish kuyoba ofeleba collectible kanye nezicathulo. Indima ebalulekile udlalwa isitayela sveg futhi Imizimba. Umuntu akufanele ube mncane.
Intombazane ngubani fan of lesi sitayela ukugqama esixukwini nge eqolo izingxenye abicah umzimba wabo. Imfanelo EsiZulwini asinayo nokuthi izimonyo elikhanyayo.
Isitayela swag azizondayo ukuhaha. Omunye ingxenye yaleli isiqondiso bangaba izidakamizwa nogwayi ezibizayo kanye Cocktails. Kwaqhamuka ukukhanya ngesikhathi esifanayo kwi izikweletu eyikhulu amadola - i sveg eliphakeme.
Kuyaphawuleka ukuthi ngokuvumelana ukudlula abantu ngomdlandla abe nomqondo eseduze kakhulu zokunambitha. Kulokhu, akusiyo esivela ngesilinganiso. Injongo eyinhloko yawo isitayela - ukuheha ukunakwa. Yingakho abalandeli bakhe ngokuvamile intsha. Lokhu kubenza bakwazi ivelele isixuku.
Okugqoka ngengubo eluhlaza: amathiphu
Thanda Moschino brand futhi amaqiniso athile mayelana nemvelaphi yawo
Indlela ukuxhuma wokudlala kwikhompyutha: imfundo
Goulash iresiphi inkukhu webele bonke bathanda
Indlela ukupheka inkukhu multivarka?
BaseMexico abangu ezenziwe ngokhuni Indaphundaphu cactus ezinsukwini ubudala?
Omuncu Cream Cake "Zebra" - iresiphi elula Wabasaqalayo emizi ezinguqulweni ezimbili
I-Herpes simplex virus: kuyingozi kangakanani?